IINKCUKACHA ZEMAC DEMARCO UTYLER, UMDIBANISELWANO WOMDALI: 'MHLAWUMBI UYACAPHUKISA KAKHULU' - IINDABA
Iinkcukacha zeMac Demarco uTyler, uMdibaniselwano woMdali: 'Mhlawumbi uyacaphukisa kakhulu'
IMac DeMarco kunye neOdd future kaTyler, uMdali kutshanje uchithe ixesha elithile esebenza kunye eL. KwiDeMarco Uthethe ngamava Kwisiqendu esizayo sikaVish Khanna Ulawulo loYilo ipodcast.
Yayiyintsebenziswano emfutshane kakhulu, ingeyiyo nantoni na eya kuthi ibonakale kulo naluphi na uhlobo lwealbham okanye nantoni na. Isuntswana lokudubula movie-mfo unayo inkqubo yeTV emva kwayo yonke loo nto. Iya kuba yinto nje emfutshane kodwa ngokuqinisekileyo iyacaphukisa ukuze sibone ukuba kwenzeka njani.
Umhlobo ofanayo ogama linguChas yayinguye umntu owakhuthaza uTyler ukuba anxibelelane, utshilo uDeMarco.
Ufana nenombolo yam fan okanye nantoni na. I-Chas eneneni ine-tattoo kaMac ngoku; Ndamnika umvambo wegama lam. Ngayiphi na indlela, wabonisa uTyler izinto zam ngaxa lithile emva koko uTyler waqala ukundibhalela. Abantu abenza umshicileli wam benza ne-Odd future's press kwaye xa bendise-LA, babefana, 'UTyler ufuna ukudibana,' kwaye bendifana no, 'Kulungile, ndiqinisekile.' Besele ndimthumele imifanekiso yam incanca ehamba ze kunye nezinto ke ndicinga ukuba ukudibana kwinyama kulungile kwikona.
UMac ukwacacisa into enokubakho yokuthengisa ehamba nealbhamu yakhe entsha, Iintsuku zesaladi :
Andiqinisekanga ukuba oku kuyakwenzeka-sizama nzima kakhulu, mna kunye neleyibhile-kodwa uyazi ezo 70s isitayile esishicilelweyo esipilini kunye nezakhelo ezintle? Njengabafileyo abanombulelo-sizama ukubamba into enjalo. Izibuko zecoke zeMac DeMarco; Inkosi ikusikelele.
tove lo lady iinkuni
Bukela iMac DeMarco isebenza kwi-ofisi kaPitchfork.tv kunyaka ophelileyo:
tyler umdali igor uphononongo
eyona rekhodi yomdlali ukuseta
iggy azalea isinda ehlotyeni
inyanga kunye ne-antarctica